20 + Neem Mmanụ Na-eji Na Ogige Ubi na Beyond - Ogige Pests
20 + Neem Mmanụ Na-eji Na Ogige Ubi na Beyond
Gịnị Bụ Mmanụ Neem?
Azadirachtin: 'Ngwá Agha Nzuzo' Na mmanụ Neem
Mmanụ Neem Dị Ọdịmma?
Ahụhụ semụ ahụhụ
Otu esi eji mmanu mmanu
Ebee Ka Zụta Neem Mmanụ
Ele nke Neem Oil maka Osisi
Ọ bụ kpam kpam Biodegradable
Ọ naghị emerụ Mmiri Gị
Ọ Na-emerụ Ahụhụ Ahụhụ
Earthworms Ga-eme nke Ọma
Neem Adighi Emeputa Mpaghara Nwụrụ Anwụ
Ọ na-egbu ụmụ ahụhụ n'oge ndụ ha niile
Blanket Control maka 200 + Ahụhụ
Neem Ga-egbu Nematodes
Mgbochi anwụnta nkịtị
Ọ na-egbu ndị Japan Japanese Larvae
Imirikiti Ahụhụ Ahụhụ Adighi Ewulite Nguzogide Neem
Ọ dị mma maka nwamba, nkịta, na ndị nkatọ
Enwere ike itinye ya n'ọrụ n'ọtụtụ ụzọ
'Achịcha Neem' Bụ Ugboro Abụọ-Whammy
Ọ dị mma maka osisi ụlọ
Ọ dị mma na Greenhouses
Na-arụ ọrụ dị ka Fungicide dị ike
Ọ Pụrụ Igbu Somefọdụ Nje Ahụ
Ọ dị na ọtụtụ usoro
Nwere Ike Iji Ya Ngwa Ngwa Tupu Owuwe Ihe Ubi
Ihe ndi ozo maka Neem Oil
Neem Mmanụ Maka Akpụkpọ anụ
Mmiri Neem Maka Nkịta na anụ ụlọ ndị ọzọ
Dị ka ndị na-elekọta ubi, anyị na-achọ ihu mgbe niile…
Ihe ga - egbochi ahụhụ, ọrịa, ma mee ka ndụ anyị dị mfe n ’ebe ahụ.
Ihe kachasị amasị nke ndị mbido na ndị ọkachamara na-eto eto bụ mmanụ neem. Ma gịnị bụ ihe a 'anwansi' ahụ kpọmkwem na olee otu o si arụ ọrụ? Ọ dị mma? You nwere ike iji ya maka ihe ọ bụla ọzọ?
N’isiokwu a, anyị na-aza ajụjụ ndị a niile (na ndị ọzọ) gbasara mmanụ neem na ojiji ya, ma n’ogige ma n’èzí.
Y’oburu n’acho aro mmanu mmanu mmanu, nke a bu ihe m choro:
Dyna-Gro Mmanụ Mmanụ Dị Ọcha Na-acha
Osisi Azadirachta indica, isi iyi nke neem mmanu.
Neem sitere n'aka Azadirachta indica osisi, nke di na ala India. A na-agbanye mkpụrụ osisi na mkpụrụ osisi nke osisi neem iji nweta mmanụ ihe oriri anyị na-akpọ mmanụ neem. N'ihi na nke neem na-ewu ewu ma na-egosipụta ọtụtụ ihe, ndị Azadirachta indica a na-azụlite gafee ụwa ebe okpomọkụ nke ụwa.
Otu ite nke mmanụ neem a na-akọwabeghị. isi mmalite
Na foto dị n'elu, ị ga-ahụ ụdị ọdịdị mmanụ neem. Ọ na-abịa n’ụdị dịgasị iche iche site na odo, na nchara nchara, na ọbụna na-acha ọbara ọbara.
Ọ na-esi ísì ụtọ nke ahụekere na galik, na-eme ka ọ bụrụ ihe na-esi ísì ụtọ nke nwere ike imetụta imi gị ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-anụ ọkụ ọkụ. Banyere ihe mejupụtara ya, ọ kachasị triglycerides . N'ihi na ọ bụ mmanụ, ọ naghị agwakọta nke ọma na mmiri ma a ga-agwakọta ya na ụdị ụfọdụ nke surfactant iji mee ka ọ dị mma maka itinye ya n'ọrụ n'ubi ahụ.
Ihe owuwu a dị mgbagwoju anya bụ maka ihe ndị na-egbu egbu nke neem dị ike. isi mmalite
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ogige dị na mmanụ neem, nke kachasị mụọ nke ọma bụ azadirachtin. Dabere na usoro mmịpụta, mmanụ neem nwere ike ịnwe ebe ọ bụla site na 300-2500 ppm (akụkụ kwa nde) nke azadirachtin, nke pụtara na ọ dị mkpa ịmata ka esi esi nweta mmanụ neem ị zụrụ.
Mgbe mbụ azadirachtin gụrụ akwụkwọ, ndị nchọpụta chọpụtara na ọ na-eme ka igurube ndị na-adịghị n'ọzara kwụsị agụụ , nke pụtara imebi ihe ọkụkụ na ihe ọkụkụ. Mgbe ọmụmụ ihe ọzọ gasịrị, a chọpụtara na ụdị ahụhụ dị 200 + na-emetụta n'ụzọ yiri nke a, ọkachasị site na igbochi agụụ ha na-eri nri, ma ọ bụ na-egbochi uto ha n'ụzọ ụfọdụ. Nke a na-eme ya dị ike nke ukwuu anyị ndị na-elekọta ubi!
Mgbe ị na-eji ụdị ahụhụ ọ bụla na mgbochi ọrịa, ọ bụ ezi echiche ịghọta etu o siri bụrụ ihe nsi na ihe anyị emela chọrọ igbu.
Imirikiti ndị mmadụ ga-enwe ntakịrị mmeghachi omume iwe na mmanụ neem n'anya ha ma ọ bụ na akpụkpọ ha. Otú ọ dị, ọ bụrụ na a inụ ya, azadirachtin nwere ike bụrụ ihe na-akpasu afọ iwe. A na-amata ogige ndị ọzọ dị na mmanụ neem dị ka nchekwa site n'aka UDSA na usoro ndị ọzọ na-achịkwa. Mụaka nwere ike ịnwe mmetụta karịa ka neem mmanụ, ebe ọ bụ na ha na-ahụkarị ihe na-egbu pesticides n'ozuzu.
I nwere ike ịjụ onwe gị, sị, 'Ọ bụrụ na neem dị irè na igbu ahụhụ, ọ gaghị emerụkwa ụmụ ahụhụ ahụ bara uru, kwa? ' Ee na mba. Ejiri ya na obere, mmanụ neem agaghị emerụ ahụhụ ndị a:
Ọtụtụ chinchi ndị bara uru
Cheta, mmanụ neem na-egbochi nri maka nchinchi nke na-achọ ịkụkpọ na epupụta gị… enweghị nke dị n'elu na-eme nke ahụ! Ya mere ọ bụrụhaala na ị naghị etinye neem na osisi gị, ị gaghị emerụ ọtụtụ chinchi bara uru na ubi gị.
Ma gịnị banyere n’okpuru ala, ebe ahịhịa ụwa na-eto nke ọma? O nwere ike iju gị anya ịnụ na iji neem eme ihe n'ezie na-enyere aka ochi ụwa.
Ọ bụ ezie na ọgwụ ahụhụ kemịkalụ oge ochie nwere ike imerụ nsị ụwa, mmanụ neem nwere mmetụta ọzọ site na ịgba ume na ọrụ ikuku ụwa. Ya mere, gbasasịa!
Iji mmanụ neem dị mfe, mana ị ga-azụta ọgwụ neem nke edoziri tupu oge a, ma ọ bụ gwakọta nke gị. Ọ dabara nke ọma, ma nhọrọ dị mfe ime!
Iji mee otu ụzọ n'ụzọ anọ (ma ọ bụ lita) nke mmiri 0,5% neem na insecticidal soap spray, ị ga-ezukọ:
1 teaspoon (5 millileters) nke dị ọcha, oyi-enwe mmanụ neem
1/3 ngaji (1-2 millileters) nke ncha nke ahụhụ
1 quart (1 liter) nke mmiri ọkụ
Iji dozie nke a na nnukwu ogbe, dị nnọọ ọtụtụ nhazi a site na nnukwu ị chọrọ ime ya.
Nwekwara ike ịchọ ihe ndọpụ uche karịa. Nke a bụ uzommeputa maka 1% ngwọta nke neem na insecticidal ncha ịgba:
6.5 ounces (millilita 200) nke mmanụ neem dị ọcha
5 teaspoons 5 (30 millileters) nke ncha ahụhụ
4 lita (20 lita) nke mmiri ọkụ
Iji kwadebe ngwakọta gị:
Gwakọta ncha ahụhụ na mmiri ọkụ
Tinye mmanụ neem na nwayọ, na-agwakọta nke ọma
Jupụta ngwakọ ubi gị na ngwakọta
Iji hụ na ọbụna na ngwa, ikwanye gị sprayer mgbe ị na-etinye
Jide n'aka na ikpuchi ma ala ma elu nke epupụta nke osisi gị. Imirikiti ụmụ ahụhụ na-akpasu iwe na-achọ ịzobe n'okpuru akwụkwọ gị na n'ime nooks na crannies nke ị ga na ahịhịa akwụkwọ. Gwa ya na ala gi dika o na - egbochi nematodes ma na - enyere aka ala gi aka.
Jiri mmanu mmanu ozigbo o mechara mee ka ọ bụrụ na ogige ndị nọ n'ọrụ na-akụda n'ime awa asatọ. Oge ọ bụla ị na-agba agba, ị ga-eme ọhụụ ọhụrụ nke mmanụ neem. Nke a pụtara na ị kwesịrị inwere onwe gị iji ụyọkọ karama gị oge ọ bụla ị na-agba!
Ọ bụrụ na ị na-eji ọgwụ neem eme ihe iji gbochie pests, ị nwere ike ịgba na 0.5% ngwọta otu ugboro n'izu abụọ ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-eji ya iji lụso ọgụ dị ugbu a ọgụ, jiri 1% mee ihe otu ugboro n’izu ruo mgbe nsogbu ahụ ga-akwụsị, wee gbanwee gaa na 0.5% ngwọta kwa izu abụọ.
You nwere ike ịzụta neem n'ọtụtụ ogige ogige ma ọ bụ nnukwu ụlọ nkwalite ụlọ, mana enwekwara ụyọkọ ntanetị ntanetị ga-ere ya. Nke a bụ ngwangwa ngwa ngwa nke isi mmalite kacha mma maka neem:
Enwere ọtụtụ ihe kpatara iji mmanụ neem na ubi gị, mana nke a bụ ụfọdụ n'ime ihe kpatara nsogbu. Ọ bụrụ na ndị a anaghị eme ka ị kwenye na itinye mgbakwunye neem na ihe eji arụ ọrụ ugbo gị, amaghị m ihe ọ bụla!
N'ihi na sitere na osisi neem, ọ bụ ihe na-emebi emebi ma na-agbaji ngwa ngwa. Imirikiti ngwaahịa mmanụ bụ naanị mmiri, mmanụ neem, na ụdị ihe mgbaze ma ọ bụ nke na-eme ka mmiri na-agwakọta ọnụ.
Otu n'ime ihe kpatara eji ọgwụ anwụ anwụ bụ ihe a na-asọ oyi bụ mmetụta ha nwere na mmiri mmiri. Ha nwere ike itinye aka na nsị na-egbu egbu dị ka ngwa ngwa nke fatịlaịza. N'IHI na mmanụ neem na-agbaji ngwa ngwa ma ọ naghị egbu egbu, ị gaghị echegbu onwe gị gbasara nsogbu mmetọ ọ bụla.
Anyị niile maara na ọ dị mkpa iji kpuchido pollinators dị ka aesụ, butterflies, na ndị ọzọ na chinchi bara uru dị ka ladybugs. Agaghi egbu egbu ndi a?
esi lekọta ụtọ nduku osisi vaịn
Mba! Ọ bụrụ na ị naghị etinye neem, ha ga-adị mma ka ha anaghị eri epupụta nke osisi gị. Mmiri mmanụ bụ isi na-awakpo ahụhụ ndị na-eri ihe ọkụkụ site na igbochi nri ha na-eme ka ha nwụọ.
Imirikiti ọgwụ ahụhụ na-egbu egbu ga-egbu nsị ụwa, wepụ ihe dị mkpa nke usoro okike gị. Neem agaghị emerụ ha ahụ - n'eziokwu, ha ga-enwe ọganihu na gburugburu neem! I choro ukpa nke di n’ala gi maka nkedo ha na ike igbari ala gi.
Ọtụtụ ụmụ ahụhụ na-emepụta sịntetik na-emepụta mpaghara nwụrụ anwụ ebe a na-agba ha. Ndị a bụ mpaghara ebe ụmụ ahụhụ - bara uru ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ - ga - adị ndụ. Nke a adịghị mma maka ụdị ndụ dị iche iche nke ubi na ala gị! N'ihi na neem lekwasịrị anya otu ụdị ahụhụ, ọ ga -emepụta mpaghara nwụrụ anwụ maka ụmụ ahụhụ ị na-achọghị n'ubi gị.
Ọtụtụ ụmụ ahụhụ na-atụkwasị naanị otu oge nke ndụ ahụhụ: akwa, larval, ma ọ bụ okenye. Neem nwere ike igbu ụmụ ahụhụ n'oge ndụ ha niile n'ihi na ọ na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ụzọ:
Na-egbochi nri (ọkwa okenye)
Na-agbagha uto (usoro nke larval)
Smothers si (egg / larval ogbo)
Izizi achọtara iji gbochie inye nri na igurube na mbara ọzara, mana ebe ọ bụ na achọpụtara na-emetụta ụmụ ahụhụ dị iche iche 200, gụnyere ụfọdụ pests na-akpasu iwe kachasị iwe:
Ọnụ ọgụgụ ụmụ ahụhụ
Ọ bụrụ na ịnabataghị nematodes na ogige… ị nwere ihu ọma. Ha nwere ike belata osisi gị, mana nchọpụta ọhụụ egosila na iwepụta neem n'ụzọ ụfọdụ nwere ike inyere aka ịchịkwa otu n'ime nematodes ndị kachasị emerụ - root-knot nematodes. Ọ na - egbochi larvae ịmịpụta nwa, na - akwụsị usoro ịmụ nwa.
N'ụzọ dị ịtụnanya, ịgba neem nwekwara ike igbochi anwụnta ị fromụ oke n'isi gị n'ubi ahụ. Ha abughi onye na-esi ísì ụtọ nke galik-peanuty ma ha ga-anọrọ n'ebe a na-agbanye neem.
A makwaara dị ka ahịhịa ahịhịa, obere ụmụ ahụhụ ndị a na-akpasu iwe bụ ahụhụ na-emebi emebi. E nwere ọtụtụ ụzọ gbochie Japan enwe , ma iji mmanụ neem na-akpaghasị uto ha bụ atụmatụ dị oke mma. Oge kachasị mma ịgba bụ n'abalị, wee tinye ya ọzọ mgbe ọ fesara ya ma ọ bụ ụbọchị mmiri ozuzo.
Otu nsogbu nke pesticides sịntetik bụ na chinchi nwere ike iwulite ndidi ma ọ bụ iguzogide ụfọdụ ihe. Ruo ugbu a, akọghị na ụmụ ahụhụ wuru nguzogide iji neem mee ihe, nke pụtara na ọ bụ azịza ga-eme n'ọdịnihu.
Kpọtụrụ pesticides na-agakọkarị na ala na mmiri, na-eme ka ọ bụrụ ihe na-emerụ anụ ụlọ na ndị nkatọ na-ebi ebe ahụ. N'ihi na mmanụ neem na-agbaji ngwa ngwa, ọ nọghị ogologo oge iji bute nsogbu anụ ụlọ na anụ ọhịa. Ọbụna ma ọ bụrụ na ha na-etinye ya, ọ naghị emerụ ha ahụ.
N'ihi na neem na-egbu ụmụ ahụhụ n'agbanyeghị ebe ha nọ na ndụ ndụ ha, ị nwere ike iji ya n'ọtụtụ ụzọ. Nwere ike iji ya dị ka foliar ịgba, tinye ya na oge oyi, ma jiri ya dị ka sook. E nwere pests ole na ole (caterpillars, aphids, mites) nke na-adị ndụ ma ọ bụ na-ehi ụra n'oge oyi, yabụ ọ bụrụ na ị nwere ike ibuso ha agha n'oge ahụ ị nwere ike igbochi ọtụtụ isi ọwụwa abịa mmiri.
O nwere ike ịbụ na ị maghị achịcha neem, mana ha bụ naanị mkpụrụ sitere na ịmịpụta mmanụ neem. A na-echi ha mkpụrụ osisi neem na mkpụrụ, mejupụtara n'ime achịcha. Ha na-ejigide ụfọdụ n'ime ọgwụ pesticide nke mmanụ neem n'onwe ya, mana ha bụkwa ihe ọkụkụ nke ga-emebi n'ala gị karịa oge, na-agbakwunye nri na mmanụ.
Dị ka a houseplant riri ahụ , Achọrọ m ijide n'aka na ụmụ ọhụrụ m dị mma ma ọ bụghị ndị ụmụ ahụhụ na-ahụkarị dị ka mealybugs ma ọ bụ aphids gafere. Neem ịgba na-arụ ọrụ zuru oke nke ọma n'ime ụlọ iji luso ọgụ ndị a na-akpasu iwe, yabụ ị nwere ike ịnwe mmetụta dị mma na-agba ya n'ime ụlọ iji mesoo ụlọ osisi gị.
Greenhouses bụ ụzọ dị ịtụnanya iji gbatị oge na-eto eto ma mepụta gburugburu zuru oke maka osisi gị, mana ọ dị nwute na ọ dịkwa oke gburugburu maka pests. Ọtụtụ ọgwụ ahụhụ dị ize ndụ maka ojiji na gburugburu gburugburu dị ka griin haus, mana neem nwere ike iji ya mee ihe n'ụzọ dị iche iche.
Mmanụ Neem na-arụ ọrụ dị ka ihe na-ekpo ọkụ maka ọtụtụ ọrịa fungal na-agakarị:
Ndị ụjọ akwa ntụ
Black ntụpọ na akwukwo ntụpọ
Must ga-agba kwa izu kwa izu ruo mgbe ị ga-ahụ mbelata dị egwu, wee fesa ugboro abụọ n'ọnwa iji gbochie ndapụta ọzọ.
Ọkụ ọkụ bụ otu n'ime ihe ndị kasị manụ nje ka ife efe gị osisi, dị ka ọ na-eme ka ha dị ka ha na-akpọ ọkụ ọnwụ. Mmanụ Neem nwere ike igbochi ma chịkwaa ọnya ọkụ, mana ị ga-etinyerịrị ya n'oge oge ụra.
Can nwere ike ịzụta mmanụ neem dị ọcha n'ọtụtụ dịgasị iche iche, mana ọ dịkwa dị ka ngwakọta na ụdị ndị ọzọ nke ọgwụ pesticidal. Otu ngwakọta a na-agwakọta bụ mmanụ neem + ncha nke ụmụ ahụhụ maka “otu ọkpọ ọkpọ” dị ike nke igbochi pesti. Ọ na-abịa n'ụdị ndị a:
Ebe ọ bụ na neem anaghị egbu egbu ma na-agbaji ngwa ngwa, ịnwere ike iji ya ọbụlagodi ebe ị na-ewe ihe ubi gị. Naanị ihe ị ga - eme bụ ịsa ha ọsọ ọsọ iji sachaa ọ bụla neem ka dị n’osisi. Don’tkwesighi ichegbu onwe gị nke ukwuu banyere usoro ịsachasị a, ebe ị na-eri obere neem agaghị emerụ gị ahụ ma ọlị.
Site na umi nke bara uru n’ubi ahụ, ọ bụ ihe okike iche ma ọ nwere ihe ọ bụla n'èzí ubi ahụ. Ihe ijuanya, ihe ijuanya - ọ na-eme!
Dị ka e kwuru na mbụ, neem mmanụ jupụtara na ọdụdụ asịd na triglycerides , na-eme ya a ike skincare emeju . A na-eji ya ete mmiri ma gwọọ anụ ahụ gbawara agbawa n’emeghị ka akpụkpọ gị yie nke na-egbuke egbuke na mmanụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ mara mma na ụlọ ahịa ahụike na-ebu ngwaahịa ngwaahịa anụ neem iji nyere aka na akpụkpọ ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ site na ihe otutu, na-a rejoiceụrị ọ !ụ! Ejirila ngwakọta Neem dị ka ọgwụ mgbochi ọrịa ọtụtụ afọ site na njirimara antibacterial. Ee, otu mmanụ ahụ nke nwere ike igbochi ọkụ ọkụ n'ubi ahụ nwekwara ike igbochi isi ojii na ihu gị! Mara mma dị ịtụnanya, nri?
The antibacterial, antifungal, na mgbochi pesti Njirimara nke neem na-eme ka ọ dị mma maka ojiji dị ka a ncha ntutu maka anụ ụlọ nakwa. Ma nkịta na nwamba nwere ike irite uru na ncha ntutu anụ ụlọ na neem na-agbakwunye ya.
Mgbe ejiri nkịta mee ya, neem nwere ike igbochi ma gwọọ ahịhịa mange, akọrọ, fleas na ụmụ ahụhụ ndị ọzọ na-akpasu iwe.
Nwamba di nwute karie ma obughi nkpuru ahia obula anabatara iji ya na nwamba. Nke a bụ n'ihi na ha na-edozi onwe ha oge niile, n'adịghị ka nkịta. Ọtụtụ shampoos neem nwekwara mmanụ ndị ọzọ, dịka mmanụ osisi tii, nke na-egbu egbu na nwamba.
Ọ bụrụ na ị ga-eji shampo mmanụ neem na nwamba, ị ga-ahụrịrị na enweghị mmanụ ndị ọzọ dị mkpa.
mgbe ị ga-akụ osisi vaịn nduku na-atọ ụtọ
esi kụrụ bulu kpakpando creeper
onwe ihicha azu tank na-eto nri
ole mmiri na akwụkwọ nri mkpa